ဆိုလာပြား အသုံးချမှုများ - သတင်း - Cixi City Rixing Electronics Co., Ltd
2. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်- လမ်းကြောင်းပြမီးများ၊ ယာဉ်အသွားအလာ/မီးရထားအချက်ပြမီးများ၊ ယာဉ်အသွားအလာသတိပေးချက်/ဆိုင်းဘုတ်မီးများ၊ Yuxiang လမ်းမီးများ၊ အမြင့်ပေအတားအဆီးမီးများ၊ အဝေးပြေးလမ်း/မီးရထားကြိုးမဲ့တယ်လီဖုန်းတဲများ၊
3. ဆက်သွယ်ရေး/ဆက်သွယ်ရေး နယ်ပယ်- နေရောင်ခြည် ပိုင်ရှင်မဲ့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် ထပ်ဆင့်ပို့ စခန်း၊ အလင်းပြန်ကေဘယ် ပြုပြင်ရေး စခန်း၊ ထုတ်လွှင့်မှု/ဆက်သွယ်ရေး/စာမျက်နှာ ပါဝါထောက်ပံ့မှု စနစ်။ ကျေးလက်ကယ်ရီယာဖုန်း photovoltaic စနစ်၊ အသေးစားဆက်သွယ်ရေးကိရိယာ၊ စစ်သားများအတွက် GPS ပါဝါထောက်ပံ့မှုစသည်တို့။
4. ရေနံ၊ ရေကြောင်းနှင့် မိုးလေဝသနယ်ပယ်များ- ရေနံပိုက်လိုင်းနှင့် ရေလှောင်ကန်တံခါးများ၏ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေနံတူးဖော်ခြင်းပလပ်ဖောင်း၏ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုနှင့် အရေးပေါ် ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှု၊ ရေကြောင်းရှာဖွေရေးကိရိယာများ၊ မိုးလေဝသ/ဇလဗေဒ လေ့လာရေးကိရိယာများ စသည်တို့။
5. မီးအိမ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ပန်းခြံမီးအိမ်၊ လမ်းမီးအိမ်၊ လက်မီးအိမ်၊ စခန်းချမီးအိမ်၊ တောင်တက်မီးအိမ်၊ ငါးမျှားမီးအိမ်၊ အနက်ရောင်အလင်း၊ ရော်ဘာဖြတ်တောက်ခြင်းမီးအိမ်၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေးမီးအိမ် စသည်တို့။
6. Photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ- 10KW-50MW အမှီအခိုကင်းသော photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၊ ဆိုလာ (ဒီဇယ်) ဖြည့်စွက်ဓာတ်အားပေးဌာန၊ ကြီးမားသော ကားပါကင်စက်ရုံများ၏ အားသွင်းစခန်း စသည်တို့။
7. ဆိုလာဗိသုကာ - အနာဂတ်တွင် ကြီးမားသော အဆောက်အဦများ လျှပ်စစ်ဖူလုံမှုရရှိစေရန်အတွက် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုကို ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အနာဂတ်တွင် အဓိက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦးတည်ချက်ဖြစ်သည်။
8. အခြားနယ်ပယ်များတွင်- (1) အထောက်အကူပြုယာဉ်များ- နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးကား/လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဘက်ထရီအားသွင်းကိရိယာများ၊ မော်တော်ကားလေအေးပေးစက်၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော ပန်ကာများ၊ အအေးဘူးများ စသည်တို့။ (၂) နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လောင်စာဆဲလ် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်သည့် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးစနစ်၊ (၃) ပင်လယ်ရေသန့်စင်မှုဆိုင်ရာ ကိရိယာများအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ (၄) ဂြိုလ်တုများ၊ အာကာသယာဉ်များ၊ အာကာသနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စခန်း စသည်တို့၊